Friday 17th of September 2021 / 12:31:02 AM
आमा छोरीको यौन प्यास मेटाएर काठमाडौंमा महल !
अनलाइन दर्पण 2018-01-23
काठमाडौ। उनको रवाफ देखेर टोल छिमेकका मान्छे चकित छन्– उनी अर्थात कलियुगका कृष्ण ३७ बर्षका राजकुमार केसी । पढन नसकेर विदेश भासिएका उनले काठमाडौको थानकोटमा साढे तीन तले घर बनाएका छन । न उनको सरकारी जागिर छ, न कुनै पेसा व्यबसाय, तरपनि केसीको जी
एजेन्सी । जसरी विश्व समुदाय डिजिटलाइज्ड हुँदै गयो त्यति नै बढि आफूलाई असुरक्षित पनि मान्न थालेको छ । आजभोलि स्मार्टफोन प्रयोग नगर्ने मानिस सायद पाउन मुस्किल छ । साथै यसको बेफाइदाको शिकार हुने पनि त्यत्तिकै छन् ।
इतिहासमा यस्ता कहियौ राजारानी छन् जसको कहानी सुनेर आज पनि हामी अचम्ममा पर्ने गर्छौ ।
कोही आफ्नो बलका लागि प्रख्यात थिए त कोही आफ्नो कार्यकालमा निर्माण गरेका भवनहरुका लागि । तर, आज हामी तपाईलाई यस्तो बारेमा जानकारी दिदै छौ जुन कुरा सुन्दा
यसकारण महिलाहरुले परपुरुषसँग अवैध सम्बन्ध राख्दारहेछन
अनलाइन दर्पण 2018-01-22
आफ्नो पति हुँदाहुँदै कतिपय विवाहित महिलाहरुले परपुरुषसँग अवैध सम्बन्ध राख्ने गर्छन । कुनै पनि परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने इजाजत हाम्रो संस्कृतिले दिँदैन । तर पनि कतिपय महिलाहरु परपुरुषसँग आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ
त्यसपछि मलाई बल्ल सेक्सको स्वाद थाहा भयो.....
अश्लील फिल्म हेरेपछि मलाई आफ्नो शारीरिक बनावट, पुरुषसँगको सम्बन्धप्रति नयाँ धारणा जागृत भयो । राति सुत्दा ओछ्यानमा म आफ्नो स्तन खेलाउने, याैनी मुसार्ने, तिग्रामा सिरानी चेप्ने, घोप्टो परेर याैनीलाई ओछ्यानमा रगड्ने जस्ता काम गर्दथेँ । यसबाट मलाई के
यौनसम्पर्कको सामान्यतया चार चरणहरू हुन्छन् उत्तेजना (Excite
नोकरलाई मालिक्नीले माथी चढाउँदा के भयाे हेर्नुहोस् भिडियो
अनलाइन दर्पण 2018-01-17
हरेन्द्र खत्रीको निर्देशनमा बनेको नेपाली संक्षिप्त टेलिसिरियल बाठो मान्छेको भाग २२१ युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको छ। युटुब च्यानल टिभी नेपाली बाट यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो। यसका निर्देशक हरेन्द्र खत्री हुन।
यसका नया नया भागहरु लाई पूर्वक
सालीसँग राेमान्स गर्दा श्रीमतीले देखेपछी.............
अनलाइन दर्पण 2018-01-14
‘हैन लोग्ने मान्छेको जात पनि कस्तो हुँदो रैछ, तरुनी हेर्दै मख्ख पर्ने । तरुनी भनेपछि धन देख्दा महादेवको तीन नेत्र भनेजस्तै हुन्छ । मन पनि कस्तो हो कुन्नि, बाटो हिँड्दा होस् कि कुनै यात्रामा होस्, यी मर्दहरू केवल तरुनीकै चक्करमा हुन्छन् । काम
मेरो उमेर २२ बर्षको भयो कन्ट्रोल नै गर्न सक्दिन। कोही छ भने भित्र दिइएको नम्बरमा कल गर्नुहोला
अनलाइन दर्पण 2018-01-12
तपाईको जस्तै उमेरमा धेरै साथीहरुलाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्छ । कतिले ब्यक्त गरे होला कतिले गरेनन् होला, अथवा अरु साथीहरुले यौनचाहना भएपछि हस्तमैथुन गरेहोला, वा अरु कुनै तवरले यौन ब्यबस्थापन गरे होला । २० बर्षको उमेरमा स्वभाबिक रुपमा यौन चाहना हुन्
याैन कुण्ठामा रुमलिएर बाँच्नेहरुका लागि ! अवस्य पढ्नुहाेस्
अनलाइन दर्पण 2017-12-24
सेक्स समस्या होइन, समस्या व्यक्तिको आफ्नै कुण्ठा हो। कोही लिंगको आकार सानो भएको कुण्ठामा रुमलिएका छन् भने कोही छातीका दाना साना भएका चिन्ताले ग्रस्त छन्। शताब्दीयौँदेखि ‘मोरल पुलिसिङ’को एकमात्र काम गरिरहेका सरकार र सामाजिक संस्थाहरूको
यौन सम्पर्क राख्नुअघि किन खानु हुँदैन यी चीज ? थाहा पाउन पुरा पढ्नुहाेस्
यौन मानिसको लागी अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता हो । यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागी हामीले निकै ध्यान दिनुपर्दछ । तपाईको गलत भोजनले पनि यौन जीवनलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ । भोजन हाम्रो शरीरको लागि निकै आवश्यक हुन्छ । यसको उचित सेवनले मात्र हामीलाई पोषण
पुरुषले अर्काकी स्वास्नी फकाउन मिल्छ भने महिलाले किन नहुने ?
अनलाइन दर्पण 2017-12-23
निरुपा प्रसून मूलत: महिलाभित्र देखा पर्ने दमित प्रेम र यौनलाई अक्षरमा उतार्ने लेखिका हुन् । अभिलासा (२०६३) कविता–संग्रह, अभिषेक (२०६६) उपन्यास तथा तिम्रो लोग्ने र म (२०७१) गरी ३ वटा पुस्तक बजारमा ल्याइसकेकी निरुपा पुराना कवि चितवन शिखरवासकी
मुनिताको यौनसम्बन्धले गर्भपतनमा पुर्यायो
अनलाइन दर्पण 2017-12-21
मुनिता (नाम परिवर्तन) नुवाकोट जिल्लाको वेत्रावतीबाट काठमाण्डु बौध्दमा रहेको एउटा गलैँचा कारखानमा उनको नातेदारको पछिलागेर काम गर्न आएकी थिइन । लगभग एक बर्ष पछिको कुरा हो, एक दिन आफ्नो ब्वाइ फ्रेण्ड्को दबावमा परेर उनी यौन सम्पर्क गर्न वाध्य भइन् ।
कस्ता युवाहरु देखि आकर्षित हुन्छन् युवतीहरु
अनलाइन दर्पण 2017-12-20
सामान्यतया युवाहरु जस्तै युवती देखेपनि आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ् । सायद त्यसैले भनिएको होला केटाले चाहे एक जुग केटीले चाहे एकै छिन् । आखिर युवतीहरु कस्ता युवाहरु देखि आकर्षित हुन्छन त् । त्यसमा सबैको आ आफ्नै घारणा हुन सक्छ । तर, पुरुषको बाह्य आकर
विवाहकाे पहिलो रातनै श्रीमान श्रीमतीले अनौठो शर्त गरेपछी..
विवाहको पहिलो रात श्रीमान श्रीमती बीच एउटा शर्त भयो कि जो सुकै आओस कसैलाई ढोका नखोलिदिने । त्यही रात केटाको बा आमा आफ्नो छोरालाई भेट्न भनी कोठामा आए । ढोका ढकढक्याउदा उनिहरु श्रीमानले श्रीमतीको अनुहार हेर्यो दुवै मुखामुख गरे तर छोराले ढोका खोलेन भ
यौनको विषय मानिसको सर्वाधिक चासोको विषय भएता पनि समाजको यसको खुल्ला चर्चा वर्जित भएकाले आफ्नै यौनांगका बारेमा धेरै कुराहरु मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ । महिला गुप्तांग अर्थात् योनी निकै संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । सम्भोग
अनलाइन दर्पण 2017-12-15
यौनिकता अनेकौं तरिकाले अभिव्यक्त भएका हुन्छन र ती यौनिकताका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन । व्यक्ति पिच्छेको प्रस्तुती फरक हुनु स्वभाविकै मानिन्छ किनकि हरेक व्यक्तिको आ-आफ्नो शैली, समय, मान्यता र सम्बेगहरू हुन्छन । यौन मनोविद्हरूले
अनलाइन दर्पण 2017-12-14
कैदीबन्दीले कारागार भित्रै शारीरिक सम्पर्क राख्न पाउने !
काठमाडौं, मंसिर २८। सन्तान उत्पादनका लागि योग्य कैदीबन्दीले कारागारभित्रै आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक संसर्ग गर्न पाउने भएका छन् । यसको चाँजोपाँजो भने कारागार व्यवस्थापन विभागले मिलाउने छ ।
कैदीबन्दीले यो सुविधा कैदीबन्दीको प्रजनन हकको कार्